PUG-ZU IMBWA INOBEREKA RUZIVO UYE MIFANANIDZO - IMBWA
Pug-Zu Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
Pug / Shih Tzu Akavhenganiswa Mhando Dzembwa
Sadie iyo Pug-Zu inosanganisa imbwa yemhando (Pug / Shih Tzu muchinjikwa) pazera remwedzi misere yairema 9 1/2 mapaundi.
Iyo Pug-Zu haisi imbwa yakachena. Muchinjikwa pakati pe Pug uye iyo Shih Tzu . Nzira yakanakisa yekuziva hunhu hwerudzi rwakavhenganiswa ndeyekutarisa mhando dzese mumuchinjikwa uye uzive kuti iwe unogona kuwana chero musanganiswa wechero hunhu hunowanikwa mune chero rudzi. Haasi ese eaya akagadzika imbwa dzakauchikwa dziri kuberekwa dziri 50% dzakachena kusvika ku50% dzakachena. Zvakajairika kuti vafudzi vaberekane mizhinji-chizvarwa michinjikwa .
Munchi iyo Pug-Zu (Pug / Shih Tzu muchinjikwa) pazera remakore-mai vake vaive ShihTzu uye baba vake vaive Pug.
'Uyu mufananidzo wembwa yangu Murphy nebvudzi rake rezhizha. Baba vake vaive Pug nhema, mai Shih Tzu. Murphy inoda hunyanzvi hwekushambadzira uye inodurura. Akangwara kwazvo uye imbwa diki inoshamisa inoda kutamba. '
Munchi iyo Pug-Zu (Pug / Shih Tzu muchinjikwa) pamasvondo masere akaratidzwawo pamusoro akazara.
Tyson iyo Pug-Zu (Pug / Shih Tzu musanganiswa) sembwanana pamwedzi mitatu
Lola brindle Pug-Zu puppy pamasvondo gumi ekuberekwa- 'Ane hunhu hwakanaka uye anofara nedzimwe imbwa nevana. Lola anonyatsoziva kutisekesa !!! Kuwedzera kukuru kumhuri yedu! '
'Pug-Zu mukomana wembwanana pavhiki nomwe-inotapira.' Yakagadzirwa naMidana's Designer Pups
Male Pug-Zu puppy ine yakareba Shih Tzu mhando furhu
Hume Pug-Zu mbwanana ine mupfupi mvere zvese izvi mwana uye mwana wepamusoro ari kubva kune imwechete marara.
'Sammy ane quirky, anodikanwa, akangwara, ane rambunctious puppy. Anoda mhanya uchitenderera seri kwemba , tamba tora nemhuka dzake dzese dzakazara (kubva mubhokisi rake rekutambisa) uye tsenga pamapfupa ake . '
Ona mimwe mienzaniso yePug-Zu
Pug-Zu Mifananidzo 1
Imbwa Diki Syndrome
mini pinscher uye chihuahua musanganiswa
alaskan malamute nhema uye chena
chii chinonzi decker rat terrier
jack russell madiki pinscher musanganiswa
dachshund jack russell terrier sanganisa hunhu
mambo charles cavalier maltese musanganiswa
st. bernard lab musanganiswa